Isi-Italian kubekho inkqubela Konga Imali kuba Eminyaka ukuya Kuhlangana kunye Tshata isi-indonesian Yena kuhlangatyezwana nazo kwi-Intanethi - YEHLABATHI KA-BUZZ
Isi-Italian kubekho inkqubela Konga Imali kuba Eminyaka ukuya Kuhlangana kunye Tshata isi-indonesian Yena kuhlangatyezwana nazo kwi-Intanethi – YEHLABATHI KA-BUZZ
Sinako ukuba ukuphila ngaphandle internet nowadays, kunye zethu omabonakude kwaye incessant loluntu media surfing. Ngoko ke, kuya ayi a surprise ukuba i-intanethi dating ngu-ngokwandisa kwi-popularity ngokunjalo. Abaninzi couples zithe azisa kunye enkosi kwi internet, xa sukuba ngenye indlela wouldn khange kuba kuhlangatyezwana nazo kwi-yokwenene ebomini. Kwaye oku kunjalo wenziwe proven kwakhona nge-Ilaria, i -yeminyaka ubudala isi-Italian umfazi abo zahlangana Zuleika, i -yeminyaka ubudala isi-indonesian umntu abahlala Bating regency, Central Java kwi-intanethi. I-ezimbalwa communicated ngamnye kunye nezinye izinto usebenzisa Facebook kwaye kamsinya, babo budlelwane blossomed kwi-uthando. Emva koko, kunye kubo bavumelana tshata ngamnye enye, nkqu nokuba kokuba zange kuhlangatyezwana nazo kwi-yokwenene ebomini.
Ilaria kanjalo iqinisekiswa ukuba yena waba wacela yakhe abazali’ iintsikelelo kwi-Italy phambi weza ukujonga kuba uthando wakhe ubomi. Yiyo loo nto, ngoaprili, Ilaria ekugqibeleni made yona Zuleika ke ekhaya kwi-Triaging dolophana, Kahneman wesithili, Bating regency.
Ngoko ke brave wakhe
Wakhe arrival ndenza commotion kule dolophana, njengoko abazange elisetyenziselwa ukufumana foreigners kwaye Zuleika ke neighbors ngokukhawuleza afune ukwaziswa ngayo amapolisa ka-Ilaria ke ubuso. A iqela le ezine amapolisa baba yiya kwinkunkuma ukuba Duiker ke indlu ukuphanda kwi-Ilaria ke arrival. Bating Amapolisa usekela-oyintloko Kuqala Insp. Agues Zindart wathi,”Thina questioned yakhe ukuze ufumanise ukuba yintoni injongo yakhe yayikukuba ka-kokuza Neindonesia.Iminyaka emibini, mna egciniweyo imali ndathola ekusebenzeni ngendlela restaurant kwi-Italy nje ukuba kwenzeka Neindonesia.”Kanjalo ukufunda: isifrentshi kubekho inkqubela Marries Isitshayina Guy Esithi Yena akakwazi Kufuneka Imoto okanye Apartment. Christmas nje jikelele yembombo nokokuba kuthetha ukuba, ngoko ke ngu omtsha nyaka.
Kodwa nabo bonke Christmas festivities
Kwimeko awuzange t uyazi, Chiang Rai ifumaneka emntla Thailand kwaye, xa kuthelekiswa yayo udade town Chiang Mai
← Dating Free Online Abantu Bathanda dating ividiyo
Free Umhla Kunzima Ukusebenza Ngokupheleleyo Free Italy-Intanethi Dating →